Wariyaasha Muqdisho Waa Halyeeyo Naftooda Hibeeyay (Qalinkii M.M. Dhoorre)
Home Opinion Wariyaasha Muqdisho Waa Halyeeyo Naftooda Hibeeyay (Qalinkii M.M. Dhoorre)
Bal ka fakir qof marka uu subaxii shaqada aadayo ay qalbiga kaga taagan tahay, ma adigaa qofka maanta wariyeyaasha muqdisho laga tooganayo? mise waa saaxiibkaa? hadana aysan arintaa baqdin ku heyn oo hoowshiisa gudanaya.
Shirarka ja raid iyo meelaha wararku ka jiraan, waxaad ku arkeysaa wajiyo ku faraxsan shaqada ay hayaan oo sita kaamiroyin iyo rikoorrada wax lagu duubo, hadana midka ugu yar 20 mar dil loogu hanjabay.
Wariyeyaasha muqdisho ka shaqeeya, waxaan si fudud u dhihi karaa “waa halyeeyo bilad mudan” kuna shaqeeyay rabitaan iyo jaceyl ay u qabaan mihnadda ay ku dhax jiraan.
Ka sokoow 20 idaacadood oo muqdisho ku yaala kuwaas oo warka meel kasta oo Soomaali ku nooshahay ka keena, waxaa kaloo magaaladu xudun u tahay TV-yada iyo Website-yada, oo iyaguna kaalin lixaad leh kaga jira soo gudbinta wararka.
Bal eeg Website-yada Soomaalida si hufan ee ay wararka usoo gudbiyaan Sida Waagacusub.com Jowhar.com, MuqdishoNews.com, Dhacdo.com, iyo Qaranka.net Website-yadan iyo kuwo kale oo badan oo aanan halkaan ku soo koobi karin, waxaa ay dadka Soomaalida dal iyo dibadba ka dharjiyaan wararka islawaqtiga ay dhacayaan, iyaga oo wata sawirro iyo muuqaal dhab ah oo ka turjumaya xaqiiqda waxa jira.
Nin baa hadda ka hor ku gafay wariyeyaasha, laakiin waxaan leeyahay “waxaad tihiin halyeeyo la iloobay” oo sharaf iyo bogaadin mudan.
By; Maxamed Maxamuud Dhoorre.